Deeqaha & Hawlgallada Barnaamijka, Neuroscience
Eileen Bloodgood Maler ayaa maamule ka ahaa barnaamijka McKnight's Neuroscience program tan iyo 2008. Doorkaani wuxuu kormeerayaa miisaaniyad $ 3.8 milyan ah, wuxuu isku xiraa saddex barnaamij oo abaalmarin ah, wuxuuna qabanqaabiyaa shir sannadeedka.
Sannadkii 2016, Maler waxa ay isku duwaysay shirkii 30aad ee sannadlaha ah ee sanadlaha ah ee Sanduuqa Dhaqaalaha ee Neuroscience, oo lagu qabtay Minnesota markii ugu horreysay 20 sano. In ka badan 120 neurosuusiyaan ah oo ka socda waddanka oo dhan, oo ay ku jiraan Nobel Laureate Richard Axel.
Maler wuxuu xiriir la yeeshay Hay'adda McKnight Foundation tan iyo 1998-kii markii ay ahayd caawiyaha maamulka barnaamijka Neuroscience. Waxay la tashatay hay'adda samafalka laga bilaabo 2001-dii ilaa 2008-dii, sameynta falanqaynta dib-u-eegista kooxeed ee dhowr meelood oo deeq ah iyo qabashada in ka badan 700 dib-u-eegis xisaabtan. Maler waxa uu haystaa BA ee muusig ka socda Jaamacada George Mason iyo MBA oo ka socda Jaamacadda St. Thomas. Waxay ku nooshahay Minneapolis ilaa 1992.